Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay Dacwadda Badda, xili lagu… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa taageero u muujiyey Somalia taasoo ku aadan dacwada badda ee ka socota Maxkamada ICJ.
Qoraal kooban oo uu soo dhigay baraha bulshada ayuu Axmed Madoobe ku sheegay inuu garab taagan yahay qareenada Somalia u doodaya.
“Waxaan garab taaganahay Qareenada iyo Xubnaha kale ee maalintii labaad u taagan dooda Dacwada Badda ee inagala dhaxeysa Kenya ee taala Xarunta Maxkamada Cadaaladda Adduunka” ayuu yiri Axmed Madoobe. Waxaa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in loo midoobo taageerada difaaca badda Somalia.
“Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in si wadajir ah loogu midoobo difaaca Baddeena taas oo ah masuuliyad saaran muwaadin kasta oo Soomaaliyeed. Waana guuleysaneynaa Inshallah.”ayuu intaas ku daray.
Hadalka Axmed Madoobe ayaa dad badan waxaa uu ku noqday yaab iyo lama filaan, maadaama lagu xanto in Maamulkiisa ay saameyn weyn ku leedahay Dowlada Kenya oo ciidamo fara badan ka joogaan Gobolada Jubbooyinka, waxaana Axmed Madoobe looga bartay inuu Kenya ka difaaco eedeymaha uga yimaada DF.